I-Semalt: I-Web Scraping Database. I-HTML Scraper kanye nezinzuzo ezinikeza amabhizinisi
I-HTML scraper iyithuluzi elimaza amakhasi we-HTML ngokukhululeka. Siyazi ukuthi iningi lamawebhusayithi amakhulu abhaliwe usebenzisa i-HTML. Kusho ukuthi ikhasi ngalinye esingayibona lidokhumenti ehleliwe - computer equipment rental in. Ukusebenzisa i-HTML scraper, singathola idatha kusuka kumakhasi ahlukene ewebhu bese siyishintsha ibe yifomethi efundekayo futhi engahlaziywa njenge-CSV ne-JSON. Kuphephile ukuphawula ukuthi i-HTML scraper ingenye yezinto eziwusizo kakhulu futhi ezimangalisa ukuhlunga iwebhu namathuluzi wokukhipha idatha enetheni. Izinzuzo zalo ezisemqoka ziye zaxoxwa ngezansi.
1. Isindisa isikhathi sethu
Nge-HTML scraper, ungakwazi ukususa ulwazi kumawebhusayithi ashukumisayo kalula. Awudingi noma iyiphi enye ithuluzi lokubhekana namakhasi we-HTML njengoba lena yonke uhlelo lokusebenza ukukhipha idatha efundekayo futhi enenjongo kuwe. Ngokungafani nezinye izinhlelo zokusebenza ezijwayelekile zokwehliswa kwedatha, i-HTML scraper ngeke ithathe isikhathi esiningi. Esikhundleni salokho, izokhipha ulwazi kusuka kumakhasi we-web ashukumisayo futhi athuthukile nje kumasekhondi. Ngokuphambene nalokho, ezinye izinsizakalo zokukhipha zingathatha izinsuku eziyisikhombisa kuya kweziyishumi bese uchitha isikhathi sakho namandla.
2. Ukusheshisa nokuvikelwa
Iningi lezinhlelo zokusebenza zokukhwabanisa kwewebhu zihamba kancane kunezingcingo ze-API, kanti ezinye azihlinzeki ngokuphepha ku-inthanethi. Ngokungafani nezinsizakalo zokudonsa idatha, i-HTML scraper yenza imisebenzi yayo ngesivinini esiphezulu futhi ingakwazi ukucubungula kuze kube ngamakhasi ewebhu ayizinkulungwane eziyishumi emaminithini angu-20 kuya kwangu-30. Ngaphandle kwalokho, leli thuluzi liqinisekisa ukuphepha kwakho nokuphepha kwakho okuphelele. Kusho ukuthi akudingeki ukhathazeke ngokuphepha kwedatha yakho ekhonjiwe njengoba kungasoze kwabelwana nabasebenzisi bangaphandle.
3. Ukugcinwa okukhulu nokuchithwa okukhulu
I-HTML scraper ingenye yalezi amathuluzi okuhlunga idatha aqinisekisa ukugcinwa okukhulu nokunemba. Kusho ukuthi idatha ekhishiwe ayikho iphutha futhi ayinamazwi adukisayo. Ngokujabulisayo, lobu buchwepheshe be-scraping ubuchwepheshe abudingi ukugcinwa nokuqinisekisa imiphumela yekhwalithi.
4. Ikusiza ukuthi uhlale emncintiswaneni
Kuleli zwe eliqhutshwa kwedatha, kudingeka siqaphe njengoba ulwazi olunikezwa enetheni luguqula sonke isikhathi esisodwa. Uma sifuna ukuthola idatha efanele, kuzodingeka sisebenzise i-HTML scraper. Eqinisweni, leli thuluzi lingasiza ukuqala kokuqala kube isinyathelo esisodwa ngaphambi komncintiswano wabo. Nge-HTML scraper, ungakwazi ukuqoqa, ukuhlela, ukukhipha futhi ukuthekelisa ulwazi eliphezulu kakhulu kumaminithi. Ngaphezu kwalokho, le nsizakalo yokukhipha idatha isisiza ukuba sihlale sibheka izitayela zamakethe zamanje futhi inikeza ulwazi mayelana namakhasi ethu omncintiswano wewebhu. Ingakwazi ukukhipha idatha enenjongo futhi efundekayo, ngaphandle kokuyekethisa kwikhwalithi. Ngakho-ke, i-HTML scraper yiyona ekhethwa yizinhlangano namabhizinisi emhlabeni wonke.
5. Iziphesheli nge-URLs ephukile
Ngezinye izikhathi sihlangabezana nama-URL aphukile futhi sifuna ukukhipha ulwazi lwabo. Nge-scraper ye-HTML, kulula ukuthi noma ubani akhiphe idatha kusuka kuzixhumanisi zewebhu eziphukile, ematatsheni atholakala ku-intanethi, nezinhlaka ze-XHMTL. Inezandiso ezahlukene ezifana ne-Loofah ne-Sanitize futhi kusiza ukuhlanza izixhumanisi eziphukile ngokushesha. Le-scrape ingadonsa idatha kumafayela we-HTML ne-XML futhi inikeze idatha enembile ngesikhathi esifushane.